महिलाहरुमा स्तन क्यान्सरको उपचार गर्ने एक्स्टेस्टेनको अन्तिम गाइड
29 सक्छ, 2019
Exemestane को बारे सबै केहि
1। Exemestane के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ? 2। Exemestane कसरी काम गर्दछ?
3। ईमानदारी प्रयोग गर्दछ 4। Exemestane खुराक
5। एक्स्मेस्टेन परिणामहरू 6। एक्स्मेस्टेन आधा-जीवन
7। एक्स्मेस्टाइन दुष्प्रभाव 8। ईमानदार लाभहरू
9। ईमानदार समीक्षाहरू 10। एक्स्टेस्टेन बिक्रीको लागि
11। महिलाहरु मा स्तन क्यान्सर को उपचार को लागि एक्स्मेस्टन
1.Exemestane के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ?
Exemestane (107868-30-4) एक मौखिक औषधि हो जुन विशेष प्रकारको छातीको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिएको हो जस्तै हार्मोन-रिसेप्टर-सकारात्मक स्तन क्यान्सर। दुर्व्यवहार पछि महिलाहरुमा क्यान्सर को उपचार मा अधिकतर प्रयोग गरिन्छ। Exemestane (107868-30-4)रोगीहरूमा कैंसरको फिर्तीलाई रोक्न पनि एक आवश्यक भूमिका निभाउँछ। सामान्यतया, केहि स्तन क्यान्सर्स वृद्धि एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा उत्तेजित हुन्छन्। यो ड्रगले लाखौं रोगीहरूलाई विशेष प्रकारको क्यान्सरबाट पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याएको छ, र डाक्टरले तपाईंको अवस्थाको जाँच गरे पछि औषधिको डिक्शनरी गर्नेछन्। यो औषधि तपाईंको शरीरमा एस्ट्रोजन हार्मोनको स्तर कम गरेर काम गर्दछ, जुन स्तन क्यान्सर प्रभावहरूलाई कम र उत्तीर्ण गर्न मद्दत गर्दछ।
तथापि, यस औषधिको बावजुद ठूलो खोजको बाबजुद तपाईंलाई स्तन क्यान्सर नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नुपर्छ, महिलाहरु लाई आफ्नो बच्चाको उमेर मा यो प्रयोग गरेर निरुत्साहित हुन्छन्। दबाइले अन्य औषधिहरू जस्तै गोस्सेलिन (Zoladex) वा तपाईंको शर्तमा निर्भर गर्दछ। डाक्टरको नुहाउने औषधि बिना औषधि प्रयोग गरी गम्भीर साइड इफेक्टहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ, र त्यसैले, तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नु अघि सधै मेडिकल परीक्षाको लागी जान सकिन्छ। औषधि विभिन्न ब्रांडहरूमा उपलब्ध छ जस्तै Aromasin तर सामग्री, र खुराक त्यती नै रहन्छ। तपाइँ औषधिले खरीदबाट सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रयोग गर्न तपाईंलाई निर्देशन दिनुपर्छ।
तपाईं अनलाइन वरिपरि कुनै पनि सम्मानित डीलरलाई औषधी किन्न सक्नुहुन्छ। तथापि, तपाईंलाई सावधानी रहनु पर्दा कुनै पनि औषधि खरिद गर्दा तपाईंले नकली उत्पादनहरू सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईले चाहानु हुने परिणामहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्न। हामी यस लेखमा पछि सर्वोत्तम र गुणस्तर सेमेस्टेन खरिद गर्न कसरी कहाँ चर्चा गर्नेछौं।
2.Exemestane कसरी काम गर्दछ?
माथि उल्लेखित रूपमा, यस औषधिले तपाईंको शरीरमा एस्ट्रोजन हार्मोनको उत्पादन घटाउन वा घटाउँदै काम गर्छ। यो हार्मोन स्तन क्यान्सरको विकासको लागि उत्प्रेरक हो, र कम उत्पादन हुँदा, यसको मतलब तपाईंले रोगको विकास नियन्त्रण गर्नु हुनेछ। तथापि, यो औषधि केवल एस्ट्रोजन रिसेप्टर सकारात्मक (ईआर +) स्तन स्तन कैंसरको प्रकारमा मात्र प्रभावकारी छ। यसको मतलब, यदि तपाईंको स्तन क्यान्सर हार्मोन रिसेप्टर नकारात्मक हो भने, एक्स्मेस्टेनले तपाईंलाई रोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दैन। त्यसोभए, यस औषधीको प्रयोग गरेर प्रत्येक कैंसरलाई उपचार गर्न सकिदैन।
एस्ट्रोजेन एक सेक्स हार्मोन हो जसले यौन प्रजनन मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ, र यसैले महिलाहरु लाई अझै सम्म आफ्नो रजोनिवृत्ति हासिल गर्न को लागी यस औषधि को प्रयोग देखि निरुत्साहित गरिन्छ। यदि तपाई यस वर्गको सदस्य हुनुहुन्छ भने, तपाईंको चिकित्सकले तपाइँको दबाइको क्यान्सरको लागि अर्को औषधी सुझाव दिनेछ जब सम्म तपाइँ बच्चाहरु लाई फेरि सहन गर्ने योजना छैन। कम एस्ट्रोजन भनेको तपाईं महिलाको रूपमा उत्पादक हुन सक्षम हुनुहुन्न र त्यसैले, यो औषधि प्रयोग गर्नु अघि तपाईले मेडिकल परीक्षा गुमाउनु महत्त्वपूर्ण छ। यो दबाइको औषधिको अरोमेटेस इन्ड्रिभेटर समूह हो
3.ईमानदारी प्रयोग गर्दछ
यो एक मौखिक औषधि हो कि विशेष प्रकार को स्तन क्यान्सर को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ। यसको अतिरिक्त, एक्स्मेस्टेन (एक्सएनएक्सएक्स - एक्सएनएक्स-एक्सएनएक्सएक्स) पनि स्तन क्यान्सर को रोकथाम मा प्रयोग गरे पछि औषधि पछि आउँछ। एक्स्मेस्टेनले स्तनपानको क्यान्सर रोगहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ जसको बारे मा 107868-30 वर्ष को लागी tamoxifen को रूप मा जानिन्छ र बिना कुनै महत्वपूर्ण सुधार को रूप मा जाना जाता हो। यो शल्यक्रिया प्रायः शल्यक्रियाबाट बच्न स्तनपान केने रोगीहरूलाई दिइन्छ जसले तपाईंको शरीरमा फेरि विकास गर्ने रोगलाई कम पार्छ। यदि तपाइँसँग रेडियो रेग्थेरेपी वा केमोथेरापी आएको छ भने, तपाईंको औषधिले तपाईंलाई एक्स्टेस्टन लिन सुरु गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय सल्लाह दिन्छ।
अर्कोतर्फ, एक्स्मेस्टेन विशिष्ट स्तन स्तन क्यान्सर प्रकारका लागि पहिलो-समय उपचारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। स्तन क्यान्सरको प्रारम्भिक चरणमा, डाक्टरले तपाईंलाई यो औषधि प्रयोग गर्न सल्लाह दिनेछ जब शर्त खराब भएन, र जब सर्जरीको लागि आवश्यक पर्दैन। कहिलेकाहीँ शल्य चिकित्सकहरूले सर्जिकल मेडिकल कार्यविधिबाट गुनासो गर्नुभन्दा ठूलो क्यान्सर क्यान्सर सिक्नका लागि दिइन्छ। तपाईंको औषधि सर्वोत्तम व्यक्ति हुनेछ तपाईलाई यो राम्रो लाग्ने सल्लाह मा तपाईंको स्तनपानको क्यान्सर अवस्थाको जाँच पछि यो औषधि लिन।
औषधि पनि स्तनपानको क्यान्सरबाट पीडित महिलाहरूलाई मदत गर्नका लागि निर्धारित गरिएको छ, जसले उनीहरूको रजोनिवृत्तिमा बिग्रिएको छ र उनीहरूले ट्याक्सीक्सिफेन लिइरहेछन्। दबाइले एस्ट्रोजेन हार्मोनको स्तर कम गर्छ, जसले हार्मोनको विकास गर्न स्तन छाती रोक्न मद्दत गर्दछ। महिलाहरूले आफ्नो रजोनिवृत्तिमा स्तनपानको प्रारम्भिक चरणमा, यो औषधि प्रयोग गर्न को लागी उनीहरूलाई रोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ औषधीले महिलाहरु मा स्तनपानको क्यान्सरको उपचार गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन अझै रजोनिवृत्ति पाउन पाईन्छ, तर तपाइँ एक्स्टेस्टन लिन सुरु गर्नु अघि तपाईले तपाइँको डाक्टरसँग कुरा गर्नु हुन्छ।
यो एक मौखिक औषधि हो र तपाईंले एक दिन पछि एक पटक 25mg ट्याब्लेट लिनु पर्छ। खुट्टा दुवै उन्नत र प्रारम्भिक स्तन क्यान्सर रोगीहरूको लागि निरन्तर छ। यो राम्रो परिणामको लागि प्रत्येक दिन औषधी एकै पटक औषधी लिन सल्लाह दिइन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सम्पूर्ण खुराक अवधिमा सबै चिकित्सकको निर्देशनहरू पालन गर्नुहोला। तपाईंको औषधि द्वारा निर्धारित गरिएको भन्दा कम वा बढी नगर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग प्रश्न उठाउनु अघि प्रश्न वा चिन्ता छ भने तपाईंको डाक्टरसँग सल्लाह दिनुहोस्। तपाईंको डाक्टरले सल्लाह दिन्छ कि तपाईले धेरै वर्षको लागि एक्स्टेस्टेन लिनु भएको छ वा यो अवधि पनि बढाउनुहोस्।
यो Exemestane खुराक अवधि तपाईंको स्तनको क्यान्सर अवस्थामा निर्भर गर्दछ किनभने तपाईंको डाक्टर द्वारा निर्धारित अवधिको लागि लिइन्छ। सामान्यतया, औषधि को लागी लगभग पाँच देखि दस वर्ष सम्म लाग्न सक्छ। कहिलेकाँही, केहि रोगी केहि वर्ष को लागि टोमोक्सिफेन पछि एक्स्मेस्टिन खुराक ले शुरू गर्छन। यद्यपि, यदि तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई यो औषधिको स्तनपानको क्यान्सरको उपचार गर्न सिफारिस गर्दछ जुन तपाईंको शरीरको अन्य भागहरूमा फैलिने वा फैलिएको छ भने, तपाईंले एक्सेस्टेन डोजज लामो समयसम्म नियन्त्रणमा लिनु भएको छ।
तपाईं राम्रो भए तापनि, आफ्नो डाक्टरको ज्ञान बिना आफ्नो खुट्टा लिनु नगर्नुहोस्। तपाईलाई निको पार्न सक्छ, तर क्यान्सर भर्खरै चम्किलो भएको छ र यदि राम्रो उपचार नगर्ने केहि समय पछि फर्कन सक्छ। यदि तपाईं एक कारण वा अन्य कारणले एक खुराक सम्झनुहुन्छ भने निम्न दिनले क्षतिपूर्तिको लागि अतिरिक्त ट्याब्लेट लिँदैन, केवल तपाइँको टेबलमा एक्स्मेस्टेन ले तपाईलाई लिनको लागी एक टेबलको रूपमा सिफारिस गरी लिनु पर्छ। अर्को दिन। सुरक्षित हुन, खुट्टा बढ्न नदिनुहोस् जबसम्म तपाईंको डाक्टरले यस्तो सुझाव दिन्छ जुन धेरै दुर्लभ घटना हो।
यो औषधि धेरै वर्षको लागि परीक्षण गरिएको छ, र यसले सही परिणाम प्रयोग गर्दा गुणस्तर परिणाम प्रदान गर्न साबित गरेको छ। धेरै वर्षको लागि, महिलाहरु मा केहि प्रकार को स्तन क्यान्सर को उपचार मा एक्सेमेस्टिन को आवश्यक छ र त्यसो भए जसले आफ्नो रजोनिवृत्ति प्राप्त गरे हो। अर्कोतर्फ, औषधि पछि फर्किन बाट छातीको क्यान्सरलाई रोक्न औषधी पनि शक्तिशाली हुन सक्छ। स्पष्ट नतिजा छ कि तपाइँ यो औषधि प्रयोग पछि मज्जा लिनु हुन्छ यो एस्ट्रोजन स्तर कम हुन्छ, जुन तपाईंको शरीरमा छातीको क्यान्सर वृद्धिको लागि मुख्य उत्प्रेरक हो। एक्स्मेस्टेन, उचित रूपमा प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत गर्दछ।
तथापि, जब मेडिक्स बाट उचित सल्लाहकार बिना ओडस्ड वा प्रयोग गरेमा गम्भीर साइड इफेक्ट जस्ता सिरदर्द र यहाँ सम्म कि एलर्जी हुन सक्छ। यसकारण, यो सधैं आवश्यक छ कि एक चिकित्सा जाँचको लागि जानुहोस्, जस्तै कि तपाईं खुराक र पछि जारी राख्नुहुन्छ। क्यान्सर रोगीहरूलाई औषधि र समग्र स्वास्थ्य अवस्थाको प्रगतिको निरीक्षण गर्नको लागि नियमित मेडिकल परीक्षाहरू जान्न सल्लाह दिइएको छ। त्यहाँ पनि अन्य नतिजाहरू जुन राम्रो परिणामका लागि एक्सेस्टेस्टेनसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर तपाईंको डाक्टर तदनुसार तपाईंलाई सल्लाह दिनेछ। यसको अतिरिक्त, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो चिकित्सक लाई कुनै एलर्जी को बारे मा सूचित गर्नुहोस र Exemestane खुराक ले लेने को जब तपाईं अग्रिम प्रभाव अनुभव गर्छन।
एक्स्मेस्टेन आधा-जीवन 24hrs छ, र यसकारण तपाई केवल एक पटक एक पटक 25mg को एक ट्याबलेट लिन आवश्यक छ। औषधी तपाईंको शरीरको तवरमा सक्रिय रहनेछ र एस्ट्रोजेन हार्मोन उत्पादनलाई सम्भव राख्नुहोस्। यद्यपि यदि तपाई आफ्नो खुराक लिनुहुन्छ बिर्सनु हुन्छ, अर्को दिन अर्को खुराक नदिनुहोस्। तपाईंको शरीर प्रणालीमा पहिले देखि नै औषधि अर्को दिन तपाईंलाई लिन सक्नुहुनेछ। पूर्ण जीवन 48hrs हो त्यसैले आफैलाई अधिकृत नगर्नुहोस्, यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ। कहिलेकाहीं, तपाईंको डाक्टरले सिफारिस गरिएका एक भन्दा बढी वा कम खुराक लिनुहोस्, र जब पनि तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई औषधि लिन रोक्न सुझाव दिन्छ, यो अझै पनि तपाइँको शरीर प्रणालीमा सक्रिय हुनेछ।
अन्य औषधीहरू जस्तै, एक्स्मेस्टनले यसको downsides छन् जुन अधिकांश व्यक्तिहरूले खुसी निर्देशनहरू पछ्याउन असफल भएका व्यक्तिहरूले अनुभव गरेका छन्। यदि तपाइँ चिकित्सक परीक्षाको लागि बिना यो औषधि लिनुहुन्छ भने, तपाईले गम्भीर साइड इफेक्टहरूको अनुभव गर्ने सम्भव छ। ओभरडाइज र एलर्जी एक्स्मेस्टाइन साइड इफेक्टहरूको मुख्य कारण हुन्। उदाहरणको लागि, औषधिले तपाईको शरीरको प्रणाली वा एलर्जीको कारणले काम गर्न असफल हुन सक्छ। यो एक नुस्खा औषधि हो, र तपाईंको डाक्टरको ज्ञान बिना यो प्रभाव हुन सक्छ परिणाम।
त्यहाँ केही सामान्य साइड इफेक्टहरू जुन सबै एक्स्टेस्टेन प्रयोगकर्ताहरूमा सामान्य छ, तर तिनीहरू खुसीको पहिलो केही महिना पछि जान्छन्। तथापि, जब साइड इफेक्टहरू लामो समयसम्म सहन वा लामो हुनसक्छन्, उनीहरूलाई कम से कम गर्नका लागि उत्तम तरिका पत्ता लगाउनको लागि तपाईको मेडिकल टीमलाई सूचित गर्नुहोस्। साधारण साइड इफेक्टहरू समावेश छन्;
मेनुपोजिम लक्षणहरूले औषधिको कारणले तपाईंको शरीरमा एस्ट्रोजन हर्मोन तह घटाउँदछ र यसैले यो तपाईंको बच्चा जन्माउने उमेर पछि यो औषधि लिन सल्लाहकारी छ। तपाईंले यो औषधि लिन शुरू गरे पछि तपाईं बच्चाहरू सहन सक्षम हुनुहुन्न।
तपाईंले खुट्टाको पहिलो केही महिनाको लागि तपाईंको जोडीहरू र मांसपेशिहरुमा पीडाहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, तर तिनीहरू समयसँग हराउँछन्।
तपाईंले अवसाद र कम मूड अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
अनिवार्य एक अन्य सामान्य समस्या हो जुन एक्स्टस्टेस्टन प्रयोगकर्ता थकान संग अनुभव गर्दछ, भले पनि तपाईले काम गर्नुभएन।
तपाईंको हड्डिहरु वा अस्टियोपोरोसिस को Thinning पनि एक अर्को पक्ष प्रभाव हो कि केहि Exemestane प्रयोगकर्ता अनुभव।
त्यहाँ अन्य गम्भीर साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाईले उनीहरूको अनुभव गर्दछन्, तपाईले तपाइँको डाक्टरलाई तुरुन्तै सुरू गर्नु अघि तपाइँलाई थाहा पाउनु पर्छ। तथापि, यी उन्नत साइड इफेक्टहरू प्रायः एक्स्टेस्टेन प्रयोगकर्ताहरूको केहि अनुभवी हुन्छन्। तिनीहरूले छाला र कपाल परिवर्तनहरू, तपाईंको शरीरमा कोलेस्ट्रल स्तरमा वृद्धि, अरूको बीचमा भूख, र लिभर परिवर्तनहरू समावेश गर्दछ। एक्स्मेस्टेन साइड इफेक्ट कहिलेकाँही तपाइँको शरीरले औषधीलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भनेर निर्भर गर्दछ। मानव निकायहरू जटिल छन्, र कहिलेकाहीँ एक औषधिले तपाईंलाई मा राम्रो काम गर्दछ, तर जब तपाईंको मित्रले यो प्रयास गर्दछ, यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा परिणाम दिन्छ। यो औषधि प्रयोग गर्दा प्राधिकृत राज्यलाई कुन पक्षले प्रभाव पार्ने यो अपेक्षा गर्न कठिन छ।
सुसमाचार यो हो कि एक्स्टस्टेस्ट साइड इफेक्ट्स को बहुमत को नियंत्रित गर्न सकिन्छ यदि तपाईं आफ्नो डाक्टर को समय मा सूचित गर्नुहुन्छ। तथापि, यो पनि तपाईंको भूमिका को सुनिश्चित गर्न को लागी कि तपाईं ड्रग निर्माता र तपाईंको डाक्टर द्वारा उपलब्ध सबै खुराक को पालन को पालन गर्नुहोस। साथै, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले राम्रो परिणामका लागि नियमित मेडिकल परीक्षाको लागि जान्नुहुन्छ। तपाईंको डाक्टरलाई कुनै पनि एलर्जीको बारेमा जानकारी दिनुहोस् कि तपाईंले खुट्टा लिन सुरु गर्नु अघि हुन सक्नु हुनेछ। कुनै पनि जटिलताहरूबाट जोगिन तपाईंको डाक्टरको साथ सबै चिन्ताहरू उठाउनुहोस्।
Exemestane लाभ महिलाहरु मा महिलाहरु को स्तन कैंसर को नियंत्रित गर्न को लागि ज्यादातर जान्दछन्। यसले शरीरमा एस्ट्रोजनको स्तर कम गर्छ जुन स्तन बढ्ने गर्नाले स्तन क्यान्सर ट्यूमरद्वारा आवश्यक हुन्छ। अर्कोतर्फ, एक सर्जिकल सर्जिकल प्रक्रिया पछि गुनासो गर्दा औषधीले तपाइँलाई भविष्यको स्तन क्यान्सरको विकासलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ। यद्यपि यो एक्स्मेस्टेन को प्रयोग को सबै भन्दा ज्ञात लाभ हो, यस औषधि लेने को लागि तपाईं आनंद उठाउने अन्य लाभहरू पनि छन्।
उदाहरणका लागि, यो एक मौखिक औषधि हो, र यसको मतलब भनेको तपाईं आफ्नो खुराकहरू लिँदा कुनै इंजेक्शनहरू सामना गर्न जाँदै हुनुहुन्न। औषधिले 48 घण्टाको एक प्रभावशाली सक्रिय जीवन छ, र यदि तपाईंलाई एक खुराक छ भने तपाईंसँग कुनै चिन्ताको लागी केहि छैन भने, तपाईलाई अर्को खुट्टा अर्को दिन लिन आवश्यक छ, र तपाईं जाने राम्रो हुनुहुन्छ। अध्ययनहरूले पनि सिद्ध गरेको छ कि सेमेस्टस्टनले पुरुष र महिला दुवैमा ओक्सीकरण र भ्रामक क्षतिबाट शरीरको ऊतकहरू रोक्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। यसबाहेक, औषधिले तपाईंको शरीरका कोशिकाहरूलाई क्षतिबाट उनीहरूको डीएनए लाई ओक्साइडेशनको समयमा यूवी विकिरणबाट सुरक्षित राख्न प्रभावकारी हुने गर्दछ। एक्स्टेनटेनले उत्कृष्ट विरोधी भ्रामक एजेन्टको रूपमा सेवा गर्दछ।
विभिन्न हेर्दै ईमानदार समीक्षाहरू, तपाईंलाई थाहा छ कि यो ड्रगले फरक प्रयोगकर्ता अनुभवहरू एक व्यक्तिबाट अर्कोलाई प्राप्त गरेको छ। तथापि, दबाइमा एक प्रभावशाली मूल्याङ्कन र राम्रो संख्यामा सकारात्मक समीक्षाहरू छन्, जसको अर्थ यो धेरै प्रयोगकर्ताहरू मा ठूलो मद्दत भएको छ। औषधि चिकित्सा संसारमा अझ आवश्यक छ त्यसैले महिलाहरु मा केहि प्रकार को स्तन क्यान्सर को उपचार र नियन्त्रण मा। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले शरीरमा एस्ट्रोजेन हार्मोन उत्पादन कम गर्नमा दबाइको लागी औषधको प्रशंसा गरेको छ, जो विकास र स्तन क्यान्सर फैलाउन जिम्मेवार छन्।
त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू जसले माया गर्छन् किनभने एक मजबूत मौखिक औषधि हो जसले गुणवत्ताको परिणाम उद्धार गर्दछ जब सही तरिकाले प्रयोग गरिन्छ। एक्स्सेस्टेन प्रयोगकर्ताहरूको बहुमतले सन्तुष्टिलाई स्तनपानको क्यान्सर व्यवस्थापन गर्न कसरी मद्दत पुर्याएको छ। अरूले पुष्टि गरे कि ड्रगले उनीहरूको छातीको क्यान्सर उपचार प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भाग खेलेको छ र बिरामीलाई फिर्ता आउनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ। डाक्टर र विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूले यस स्तन क्यान्सरको औषधिको शक्तिलाई पनि प्रदर्शन गर्दछ। संक्षेपमा, छातीको क्यान्सरका रोगहरूको एक ठूलो प्रतिशतले ईमेस्टेस्टेन सकारात्मक समीक्षा र उत्कृष्ट मूल्याङ्कनहरू दिएको छ।
समान रूपमा, केही प्रयोगकर्ताहरूले यस औषधिको साथ राम्रो अनुभव गरेका छैनन् र उनीहरूको निराशा व्यक्त गर्दै छन्। यो धेरै उत्पादनहरूको लागि अधिक सामान्य छ त्यसैले औषधीहरू केही प्रयोगकर्ताहरूका लागि काम गर्न असफल भए। तथापि, एक्स्टस्टेस्ट प्रयोगकर्ताहरूको धेरै जसो जसले दु: ख साइड इफेक्टको अनुभव गरेको छ यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा औषध समावेश गर्न असफल भयो। कुनै औषधी प्रयोग गर्न सुरु गर्नु अघि एक मेडिकल परीक्षा महत्वपूर्ण छ। यो पनि सल्लाहकारी छ कि तपाई यो औषधि लिँदा कुनै पनि दुर्व्यवहार प्रभावको सामना गर्न तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईं राम्रो समय मा आफ्नो डाक्टर को सूचित गर्नुहुन्छ लगभग सबै एक्सेस्टेस्ट साइड प्रभाव को नियंत्रित गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया, एक्सेस्टेन एक शक्तिशाली दबाइ हो जुन महिलाहरु मा स्तनपान को क्यान्सर को उपचार मा महत्वपूर्ण छ। औषधिको अधिकतम लाभहरूको अनुभव गर्ने उत्तम तरिका भनेको सिफारिस गरिएको खुराकमा रहनुहोस् र तपाईले कुनै पनि उन्नत प्रभाव अनुभव गर्नुपर्दा तपाईंको चिकित्सकीय टोलीमा सामेल हुन सक्दछ। आफ्नो डाक्टरको सल्लाह बिना नै औषधि लिनु नगर्नुहोस् किनभने तपाइँ स्तन क्यान्सर नियन्त्रण गर्न असफल हुन सक्नुहुनेछ, जुन हत्यारा रोग छ। कहिलेकाहीं औषधिले तपाईंको लागि काम गर्न असफल हुन सक्छ, तर तपाईंको डाक्टरले तपाईलाई तपाइँको शरीरको प्रणालीमा मित्रतापूर्ण वैकल्पिक औषधि प्रदान गर्नेछ।
10।एक्स्टेस्टेन बिक्रीको लागि
एक्स्टेस्टेन बिक्रीको लागि विभिन्न काउन्टीहरू वा क्षेत्रहरूमा विभिन्न ब्रान्ड नामहरूमा बेचेको छ, र यस औषधिको लागि सबैभन्दा सामान्य ब्रान्ड नाम Aromasin हो। तपाईं बल्क अनलाइनमा वा तपाईंको वरपर कुनै पनि फार्मेसीबाट एक्सेस्टेन किन्न सक्नुहुन्छ, तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई तपाइँको डाक्टरको सल्लाह बिना लिनु हुँदैन। तपाईंलाई सुनिश्चित गर्नुहोस् एक्स्मेस्टेन पाउडर किन्नुहोस् एक सम्मानित विक्रेता वा निर्माताबाट राम्रो परिणामका लागि। हरेक होइन एक्स्मेस्टेन आपूर्तिकर्ता तपाईलाई अनलाइन भेट्टाउन सकिन्छ। केहि कम गुणस्तर वा सामान्य औषधी हुन सक्छ जुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागी खतरनाक हुन सक्छ। सही निर्णय गर्न तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न ग्राहक समीक्षाहरूको लागि हेर्नुहोस्।
तपाईंको डाक्टरले कसरी विश्वसनीय र विश्वसनीय विक्रेताबाट सर्वोत्तम र उच्च गुणस्तरको मेसेस्टेन प्राप्त गर्न तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। हामी क्षेत्र मा सर्वश्रेष्ठ सर्वमेस्टेन निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो, र हामी समय-समयमा डिलिवरी बनाउँछौं। आज तपाईंको अर्डर बनाउन र गुणवत्ता क्वालिटी प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहोस् कि तपाईले स्तन क्यान्सरबाट लड्न मद्दत गर्नेछ। हाम्रो वेबसाइट प्रयोगकर्ता-अनुकूल छ। यस प्रकार, तपाईं आफ्नो घर को आराम देखि तपाईंको अर्डर आरामपूर्वक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न वा चिन्ता छ भने, तपाइँ सधैँ हामीलाई हाम्रो इमेल र सम्पर्कहरू मार्फत हाम्रो वेबसाइटमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्कोतर्फ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंको देशका नियमहरू प्रयोग, अधिकार, र एक्स्मेस्टेनको खरिदको बारेमा बताउँछ। हामी एक कानून-आधारित कम्पनी हो, र हामी हाम्रा ग्राहकहरू हाम्रो उच्च-गुणस्तरका उत्पादनहरू आयात वा खरिद गर्नको लागि तिनीहरूको घर देशका कानुनी कानुनसँग समस्यामा राख्न चाहनुहुन्न। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडामा, एक्स्मेस्टिनले नुस्खा मात्र औषधि बनी रहन्छ। यसको अर्थ तपाईंले चिकित्सक किन्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईसँग डाक्टरको नुस्खा छैन। तथापि, यसलाई स्वामित्व, खरिद वा औषधि प्रयोग गर्न अवैध छैन, तर एक्स्टेस्टेन यी दुई देशहरूमा काउंटर ड्रगभन्दा बढी छैन।
11।महिलाहरु मा स्तन क्यान्सर को उपचार को लागि एक्स्मेस्टन
एक्स्मेस्टन एक उत्कृष्ट औषधि हो जसले महिलाहरु मा महिलाहरु लाई स्तन कैंसर को उपचार मा जरूरी हुनु को साबित गरेको छ। औषधि उत्पादन र तपाईंको शरीरमा एस्ट्रोजन हार्मोन स्तरहरू कम गरेर काम गर्दछ जुन विकासको लागि जिम्मेवार छन् साथै तपाईंको शरीरमा स्तन क्यान्सर फैलिएको छ। दबाइ प्रायः स्त्रीहरु द्वारा आफ्नो रजोनिवृत्ति हासिल गरेको छ किनकि यसले बच्चाहरु लाई असर पार्छ जुन अझै पनि उनीहरुका बच्चाहरुका उमेरमा हुन्छन्। सफलतापूर्वक उपचार पछि प्रयोगकर्ताहरु लाई रिफ्यान वा स्तनपानको क्यान्सर फैलाउन ईस्टेमेनेन पनि सुरक्षित राखिएको छ। तपाईंको छातीको क्यान्सर अवस्थाको आधारमा, तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई सल्लाह दिन्छ कि त्यो औषधिको उपचारको लागी यदि तपाईंको क्यान्सरको प्रारम्भिक चरणमा छ भने। शल्यक्रिया प्रक्रिया अघि बढ्नु अघि तपाईंको दबाइले केहि समयको लागि प्रयोग गर्न एक्स्टेस्टेनको पनि व्याख्या गर्न सक्छ।
यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाईं प्रति दिन 25mgs को एक ट्याब्लेट लिनुहुन्छ, जुन उन्नत प्रारम्भिक चरणहरूमा स्तनपानको उपचारका लागी उन्नत र दुबै रोगीहरूका लागि लगातार खुराक हुन्छ। ड्रग आवश्यक आवश्यक औषधहरू सँगसँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन तपाइँको डाक्टरले तपाइँको लागि उपयुक्त महसुस गर्नेछ। तपाईंको डाक्टरसँग परामर्श नगरी सेट खुराक बढाउन वा कम गर्न कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। यदि तपाइँ औषधि सम्पर्कको लागि तपाईंको चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्दा तपाइँले कुनै पनि दु: ख साइड इफेक्ट अनुभव गर्नुहुन्छ। खुट्टाको पहिलो महिनामा केही दु: ख जस्तै सिरदर्द, चक्कर दुख्ने, र उल्टी सामान्य हुन सक्छ, तर यदि तिनीहरू सामान्यतया रहन्छ भने तपाईंको भौतिक लाई सूचित गर्दछ। यदि तपाईं सही कदमहरू लिनुहोस् र डोज निर्देशनहरू पालना गर्नुहुन्छ भने लगभग सबै एक्स्टेस्टेन साइड इफेक्टहरू नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ।
शरीरनिर्माणको लागि दिहाइड्रोबल्डेनोन / DHB को अन्तिम गाइड(नयाँ ब्राउजर ट्याबमा खोल्छ)
गोस्स, पीई, इन्ल, जेएन, एलेन्स-मार्टिनिज, जेई, चेङ, एएम, चिब्बोस्की, आरटी, वक्टवास्की-वेन्ड, जे, ... र विनकुस्ट, ई। (एक्सएनएनएक्सएक्स)। Postmenopausal महिलाहरु मा स्तन कैंसर को रोकथाम को लागि एक्स्मेस्टन। औषधीको नयाँ इङ्गल्याण्ड जर्नल, 364(25), 2381-2391।
यर्डले, डीए, नोगुचि, एस, प्रिचर्ड, केआई, बूरिस, एचए, बासेगागा, जे, गुन्नन्ट, एम।, ... र मेलिचार, बी (एक्सएनएमएक्सएक्स)। एचआर + छातीको क्यान्सरको साथमा पोस्टमेनोपोल रोगीहरुमा एसोलोमस प्लस वेस्टर्नस्टेन: बोलोरो-एक्सएनक्सएक्स एक्सचेन्ज-फ्री अस्तित्व विश्लेषण। उपचार मा अग्रिम, 30(10), 870-884।
पगानी, ओ., रेगन, एमएम, वाल्ले, बीए, फ्लेमिङ, जी एफ, कललोनी, एम।, लान्ग, आई।, ... र सर्क्युलियोस, ई। (एक्सएनएनएक्सएक्स)। अग्रजपना स्तन स्तन क्यान्सर मा डिम्बग्रस्त दमन संग Adjuvant exemestane। औषधीको नयाँ इङ्गल्याण्ड जर्नल, 371(2), 107-118।